फिल्मले फ्ल्प बनाए पनि खसिनी काण्डले हिट भएकी को हुन् आशिका तमाङ ?::News from Nepal
फिल्मले फ्ल्प बनाए पनि खसिनी काण्डले हिट भएकी को हुन् आशिका तमाङ ?
काठमाडौं – पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ हुन चाहनेहरुको कुनै कमी छैन । त्यसका लागि विभिन्न ‘स्टन्ट’हरु सामाजिक सञ्जालमा प्रसस्तै देख्न पाइन्छ । ति मध्ये कति स्वाभाविक हुन्छन् भने कति अस्वाभाविक ।
नेपालीहरुको महान चाड दसैं ‘संघारमा आइपुगेको’ छ । यो पर्वलाई कतिपयले ‘मासु खाने’ पर्वका रुपमा पनि मनाउने गर्दछन् । दसैं भन्ने वित्तिकै कतिपयका लागि रामरउस गर्ने, मस्ती गर्ने, मासु खाने पर्वका रुपमा परिचित छ । तर, दसैंको महत्व यतिमा मात्र सीमित भने छैन ।
कुरा हो दसैंको मुखैमा समाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको शब्द ‘खसिनी’को । सामाजिक सञ्जालमा खसिनी शब्दमात्र ‘हिट’ भएको छैन । त्यससँगै त्यसलाई प्रयोग गर्ने आशिका तामाङ पनि हिट भएकी छिन् ।
तामाङ नायिका हुन् । हाल जर्मनीमा रहेकी उनले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा एक भिडियो अपलोड गरिन् । जसका कारण अहिले उनको चर्चा चुलिएको छ । यो उनको चाहना अरुसारै भएको थियो कि अनपेक्षित थियो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
उक्त भिडियोमा उनले मासुका लागि जनावरको हत्या नगर्न आग्रह गरेकी छिन् । त्यसक्रममा उनले मन थाम्न नसकेर आँशु खसालेको दृश्य हेर्न पाइन्छ । त्यसमा प्रयोग गरिएका शब्दहरु सामाजिक सञ्जालमा उनलाई उडाउने विषय बनेको छ ।
क्वाँ–क्वाँ रुँदै नायिका आशिकाले भनेकी छिन्, ‘मासु खानुपर्छ तर गाई बस्तु, खसी–खसिनीहरुको हत्या नगर्नुहोला, यदी मासु नै खाने भए पनि घरवारविहीन अनाथ पशुलाई मात्र मार्नुहोला ।’
झण्डै २ मिनेट लामो उनको भिडियोमा उनी निक्कै भाबुक बने पनि स्वाभाविक भने देखिएको छैन । धेरै पशुहरुको बली दिइने दसैंको मुखमा अस्वभाविक भाबुकता प्रकट गरेपछि भिडियो सेयर हुने र चर्चा बटुल्न सफल हुने उनको योजना रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर उनले प्रयोग गरेको खसीनी शव्द र ‘हत्या नगरी मासु खानुहोला’, ‘घरबारविहीन पशुको हत्या गर्नुहोला’ भन्ने सुझवाले उनी उल्टै हासोको पात्र बन्न पुगिन् ।
धेरैले ‘भाइरल हुनका लागि गरेको नौटङ्की गरेकी’ भन्दै कमेन्ट गरेका छन् । उनको ‘निर्दोषिता’ भन्दै आश्चर्य प्रकट गर्नेहरु एक दुर्ई जनामात्र भेटिन्छन् । तर स्टाफ नर्स र नायिकासमेत रहेकी उनले बनाएको सो भिडियोलाई निर्दोषिता भन्दा भाईरल हुन रचेको प्रपन्चको रुपमा धेरैले बुझेका छन् ।
शब्द चयन र वाक्यांश सही प्रयोग गर्न नसक्दा उनी उल्टै हासोको पात्र बनेको अांकलन गरेका छन् । पशुहत्या नगर्न आग्रह गरे पनि उनी पनि भेजिटेरियन होलीन् भन्ने धेरैले सोचेका थिए । तर उनले मःमका डल्ला र मासुका परिकार खाएका पुराना फोटोहरु फेसबुकमा भाईरल बनाईएको छ ।
को हुन् आशिका तमाङ ?
आशिका तमाङ केही वर्ष अगाडि प्रदर्शन भएको फिल्म ‘सुश्री’ की नायिका हुन् । त्यति बेलाका चल्तिका नायक आर्यन सिग्देलसँग उनले खेलेको फिल्म राम्रो भए पनि व्यवसायिक रुपमा असफल बन्यो । व्यापारमा असफल भए पनि ‘सुश्री’ले यूट्यूवबाट राम्रै कमाई गरेको छ । अहिलेसम्म ३८ लाख पटक हेरिएको देख्न सकिन्छ । जुन फिल्म आशिकाले आफ्नै ‘आशिका फिल्म्स प्राली’ बाट बनाएकी थिइन् । फिल्म डुबेपछि विदेशिएकी उनी सामाजिक सञजालमा क्रियासिल छिन् ।
अर्काे फिल्म खेल्न भन्दा सामाजिक संञ्जालमै दर्शकसँग भिज्न रुचाउदै आएकी उनले चर्चित हुन रचेको पछिल्लो ‘खसिनी काण्ड’बाट भने आलोचना खेप्नुपरेको छ । फिल्ममा उनले शहरीया युवतीको भूमिकामा स्वभाविक अभिनय गरे पनि टिकटकमा अस्वभाविक अभिनय गरेकी उनी सामाजीक सञ्जालमा निक्कै उडाइएको छ । तर उनले आफू निर्दाेष रहेको भन्दै नउडाउन आग्रह गरेकी छिन् । आफुलाई हासोको पात्र बनाउदै लेखिएका केही स्ट्याटसमा आशिकाले ‘मेरो भिडियोमा हास्नुपर्ने कुरा के छ ?’ भन्दै प्रतिबादस्वरुप कमेन्ट गरेको देख्न सकिन्छ । साथै उनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा धेरै नउडाउनसमेत आग्रह गरेकी छिन् ।
पलको अभिनयमा ‘१४ अञ्चल ससुराल’
रमेश खत्रीले ल्याए ‘म परदेशी’
भुसन राइको नयाँ गीत ‘मरुभूमी’
सागर आलेको नयाँ गीत ‘पल्लाघरे काका’